Xisbiyada Mucaaradka Iyo Hay'daha Xuquuqul Iisaanka Oo Somaliland Ku Eedeeyay Inay La Dagaalamayso Xoriyada Hadalka.
(Hadhwanaagnews) Tuesday, February 12, 2019 17:17:26
Xisbiyada mucaaradka ah, hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo ururrada ay ku midaysan yihiin saxafiyiintu ayaa ku eedaynaya Somaliland in ay la dirirsan tahay xorriyaddii hadalka.
"Dhawaan Boorama iyo Gebilay saxafiyiin ayaa lagu xidhay, kuwaasoo lagusoo eedeeyey inay dawladdu dhibbane u tahay. Degmada Wajaale ayaa iyana weriye lagu xidhay iyadoo Maayir ku xigeenka Wajaale ka danbeeyey", ayuu yidhi Maxamuud Jaamac Xuuto oo ah Guddoomiyaha Ururka Saxafiyiinta Somaliland oo BBC-da la hadlay.
saxafiyiinta oo kali ah ma aha waxyaabaha Somaliland lagu eedeeyay ee waxay albaabada u laabtay wargeyska Hargeysa kasoo baxa ee foorre, waxayna ku eedaysay si xun wax u sheeg, balse masuuliyiinta wargeyska ayaa sheegay in eedaymaha loo soo jeediyay ay siyaasadaysan yihiin.
Tan iyo intaas ay Somaliland jirtay, waxa ay baadi goobaysay aqoonsi, iyadoo mas'uuliyiintuna ay sheegayeen inay u qalmaan isla mar ahaantaana dimuqaaddiyad dhif ku ah gobolka ay soo bandhigeen, iyagoo shan madaxweyne si nabada xilka ula kala wareegeen, weliba doorasho qof iyo hal cod ah ay dhacday.
"Dhaawac weyn ayay u geysanaysaa haddii la cabudhiyo saxaafadda iyo xorriyadda hadalku" waxaa sidaa BBC-da u sheegay Dr Mustafe Kaydsane oo ka faallooda arrimaha geeska